Chechipiri, mutsauko uripakati pvc pombi uye ppr pombi
Musiyano uripo pakati pePPR pombi nePVC pombi wakasimba, saka ukobvu hwepombi dhayamita ndiyo hwaro, asi izvo zvakakosha zvekuzivikanwa uku zvinofanirwa kuve neruzivo. Chekutanga pane zvese, iwe unofanirwa kunge uchiziva nharaunda pombi uye zvirinani uve nepfungwa. Mune ino kesi, mushure menguva refu ...
Mapaipi epc uye pombi dzepvc zvakafanana mukushongedza? Ndeupi musiyano uripo pakati pc chubhu uye pvc chubhu？
Iyo pc chubhu yakafanana neiyo pvc chubhu? Ndeupi mutsauko uripo pc chubhu uye pvc chubhu? Ini ndinotenda kuti vazhinji varidzi veshongedzo vakavhiringidzika nezve izvi, saka nhasi indasitiri manejimendi manejimendi inogovera kuunzwa kwepc pombi uye pvc pombi kune wese munhu, ngatitarisei! 1 ...